Iindaba -Suntop ezenzekelayo ye-3000W ifayibha laser ukusika umatshini ukufakelwa eFrance ngempumelelo
Ukusuka kuphando kunye nophuhliso kuyilo kwimveliso, emva kweentsuku ezingama-40 zemigudu yabo bonke abasebenzi be-SUNTOP, sazenzela ukutya okuzenzekelayo ngokupheleleyo kunye nokothula umatshini wokusika we-CNC wefayibha ifakwe ngempumelelo eFrance.
Isantya esisebenzayo sokulayisha kunye nokwehlisa kukhawuleza kakhulu, ngamaxesha ama-2 eJamani i-TRUMPF yohlobo lwe-cantilever yokulayisha kunye nokothula kwiworkshop efanayo. Umthengi wanelisekile malunga netekhnoloji ye-SUNTOP yethu.
Kutshanje i-SUNTOP ivelise ngempumelelo inkqubo yokutyisa nokuzothula ngokuzenzekelayo enomthwalo we-2500KG ofanelekileyo ekulayisheni nasekulayisheni isinyithi esikhulu, iya konga kakhulu iindleko zabasebenzi, yenze iworkshop ingakhathalelwanga, kwaye ibeke isiseko esihle seshishini 4.0.
Ngokwembono yabadlali bemakethi, ukungeniswa kunye nokuthunyelwa kwamashishini abucala kuye kwanda kakhulu, kwaye indima yorhwebo lwangaphandle "ukuzinzisa" yayibalasele. Idatha ibonisa ukuba kwiinyanga ezili-10 zokuqala, ukungenisa nokuthumela ngaphandle kwamashishini abucala kufikelele kwi-12 yezigidi zeerandi, ukwanda kwe-10.5%, ukubalwa kwe-46.2% yexabiso lokurhweba langaphandle e-China, ukonyuka kwamanqaku e-3.9 kwithuba elifanayo kunyaka ophelileyo. . Phakathi kwabo, ukuthunyelwa kwelinye ilizwe ibiyi-7.94 yezigidigidi ze-yuan, ukwanda kwe-10.9%, ukubalwa kwe-55.4% yexabiso lilonke lokuthumela ngaphandle; ukungeniswa elizweni kwakuyi-4.06 yezigidigidi ze-yuan, ukwanda kwe-9.7%, kubalwa i-35% yexabiso lokungenisa lilonke.
Ukujonga phambili kwikamva, kulindeleke ngokubanzi ukuba urhwebo lwangaphandle kunyaka wonke luza kuqhubeka nokugcina imeko ezinzileyo nenethemba. U-Tang Jianwei, umphandi oyintloko weziko lophando lwezezimali kwi-Bhanki yezoNxibelelwano, uthe umthamo wokungenisa kunye nexabiso lesinyithi, iimbotyi zesoya kunye nezinye izinto zorhwebo zonyukile, nto leyo ebonisa ukuba ibango lasekhaya alikabuthathaka. Isalathiso sokungenisa i-PMI ngo-Okthobha yayiyi-50.8%, i-0.4 yepesenti yamanqaku aphezulu kunaleyo yenyanga ephelileyo, kwaye yayingaphezulu komda wokugqabhuka kunye nokugcwala iinyanga ezimbini zilandelelana. Ngokufumana kwakhona ukusetyenziswa kwasekhaya kunye nemfuno yemveliso, ukungenisa okulandelayo kulindeleke ukuba kuqhubeke.
Ifayibha Laser Tube Ukusika Umatshini, Umbhobho weFibre Laser umsiki, Ifayibha I-Laser Ukusika Umatshini, Umatshini wokusika we-Fiber Laser, Tube Laser umsiki, Ifayibha I-Laser Ukusika Umatshini,